Kitra – «Can 2019»: mpilalaon’ny Barea telo nahazo karatra mavo | NewsMada
Mbola ao anatin’ny fanomanantena fatratra hiatrehana ny fihaonana faharoa, hikatrohana amin’i Burundi, ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Hatreto, ao anatin’ny fametrahana ny taktika ny mpanazatra.
Kihon-dalana lehibe ho an’ny Barean’i Madagasikara ny fihaonana hifandonany amin’i Burundi, hatao ny alakamisy ho avy izao. Hiankina amin’ny vokatra eo mantsy ny ho tohin’ny lalany. Mila fitandremana goavana ny mpanazatra amin’ny fandaharana ireo mpilalao hiakatra eny ambony kianja.
Anisan’ny mametraka olana mantsy ny fahazoan’ireo mpilalao telo mirahalahy karatra mavo. Anisan’izany i Amada sy i Marco ary i Metanire. Azo ampiakarina kianja ihany ry zalahy, saingy tsy ho afaka hilalao amin’ny fifandonana amin’i Nizeria raha mbola mahazo karatra mavo fanindroany, izay mbola fihaonana goavana sy hanan-danja ihany koa. Etsy ankilany, mpilalao iray ihany ny nahazo karatra mavo ho an’i Burundi. Hatreto, mbola ao anatin’ny fijerena ny paikady hiatrehana ny lalao amin’i Burundi, amin’izao fotoana izao, ny mpanazatra sy ny ekipany.
Raha ny fahitan’ireo teknisianina, somary mavesatra ireo vodilaharana malagasy ka tsy tokony hanao fiarovantena milahatra. Tsy misy tokony hovaina kosa ny irakiraka satria nahafehy tsara ny baolina ary afaka nandrindra ny fanafihana. Mila asiam-panamboarana ihany koa ny lohalaharana satria tsy ampy mpamono baolina.
Ankoatra izay, manaraka fanazaran-tena mitokana i Jeremy Morel, izay voadona teo amin’ny tongony.
Lalao roa ihany ny anio
Mandra-piandry izany, tsy misy afa-tsy fihaonana roa ihany ny hotanterahina amin’ity talata ity: ny lalao ao amin’ny vondrona F, izay hiakatra kianja ao Ismailia. Anisan’izany ny fifandonana eo amin’ny Liona tsy voafolak’i Kameronina sy i Ginea Bisao. Tsy afaka hilalao, amin’ity, i Faï Collins, vodilaharana kameroney.
Noho ny karatra mavo roa azony nandritra ny fifanintsanana ny anton’izany. Any amin’ny fihaonana faharoa, hikatrohany amin’i Kintana maintin’i Ghana, hatao ny 29 jona ho avy izao, vao afaka hiakatra kianja i Faï Collins.
Ny Ganeanina izay hifandona amin’ny Les Ecureuils-n’i Benin. Manana olana ihany koa ny Beninoà amin’ity satria tsy afaka hilalao ihany koa i Stéphane Sessegnon. Na efa 35 taona aza i Sessegnon, ilain’ny Les Ecureuils ny traikefan’io mpilalao io.